Inay Liverpool Cadow Weyn Tahay, Sababta Uu Jecel-yahay Lukaku & Mourinho Oo Afka Furtay %
EnglandFeaturedLatest Sports News
Tababaraha Manchester United, ninka lagu magacaabo Jose Mourinho, kaasoo warbaahinta la hadlay ka hor ciyaarta ay la balansan yihiin Liverpool, ayaa sheegay in Reds ay tahay koox uu xifaaltan weyn kala dhaxeeyo.
Labadaan kooxood ayaa ciyaartooda waxay tahay mid kaalinta labaad isku haystaa, waxaana ciyaartooda oo arkaa inay tahay mida go’aamin doonta kooxda kaalintaas fasal ciyaareedkan uga dhameysan karta.
“Kani waa kulan qaas ah, mana ahi aniga xitaa sababta, maxaa yeelay kulan walba wuxuu yahay mid aanan maskax ahaan fiicneen, laakiin kani waa kulan gaar ah,” ayuu Mourinho hadalkiisa ku bilaabay.
“Uma arko AC Milan, Atletico Madrid ama xitaa Arsenal ama Spurs cadow weyn, laakiin [Liverpool] waa koox uu xifaaltan weyn uu naga dhaxeeyo,” ayuu hadalkiisa ku daray hogaamiyihii hore ee Los Blancos.
“Aniga ahaan wuxuu yahay labadaan kooxood ee wada dheelaya waa kuwa taariikh badan ku leh kubada cagta England, sidoo kale dhibcaha saaran kulankaan waa kuwa muhiim ah, waana ciyaar ay dheelayaa kooxo waa weyn.
Geesta kale, Mourinho oo ka hadlayay muuqaal ciyaareedka Romelu Lukaku kaasoo sheegay inuu yahay ciyaaryahan kooxda Mourinho, u ah sarkaalka ugu sareeya, ayaa wuxuu ku raacay ninkaan reer Portugal sheekadaas.
“Waa shaqsi muhiim ii ah aniga – Waa midka kamid ah shaqsiyaadka aan aaminsahay, waan jeclahay muuqaal ciyaareedkiisa iyo waliba dhaqankiisa,” ayuu hadalkiisa kusii daray Mucalimuu Mourinho.
“Kulankii Crystal Palace, wuxuu kadib markii uu dhaliyay goolkii saddexaad, waxaana usheegay inuu udheelo sida daafac dhexe ee dambeedka, wuxuuna shan ku yahay Smalling iyo Lindelof, maxaa yeelay isbedal badan ma sameeyo.
“Marka, aan waqti ku dhoho weerar yahan, ‘bax oo shaqadaas ii qabo aniga’ kadib uu sida ay tahay uqabto, waa taliye, waa shaqsi aan aamini karo, muuqaal ciyaareedkiisu waa mid aan caadi ahayn.
“Taasi waa sababta aan marar badan kuu sheegay, aniga ahaan, ma ahan oo keliya goolasha uu dhaliyay, waxa ay ku saabsan tahay waxa uu u keeno kooxda, wuxuuna kooxda sii yaa Isbiirad badan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Liverpool vs Man UnitedPremier League